နှင်းဆီ ပရိသတ်တွေ အတွက် ထူးခြားပြီး ပျော်စရာကောင်း တဲ့ အစီအစဥ်သစ် လေးကို ပြောပြလာတဲ့ နေတိုး – Real Link
နှင်းဆီ ပရိသတ်တွေ အတွက် ထူးခြားပြီး ပျော်စရာကောင်း တဲ့ အစီအစဥ်သစ် လေးကို ပြောပြလာတဲ့ နေတိုး
အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ လူကြိုက်များလှ တဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့ ကလည်း ရယ်မော ပျော်ရွှင်စေ တဲ့ ရယ်စရာ ဟာသပျက်လုံး တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအပျော်တွေ ဖြစ်စေခဲ့ပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေ ပြေပျောက်စေကြတာ မို့လည်း နှင်းဆီ အဖွဲ့လေးကို အားလုံးက လက်ခံ သဘောကျနေ ကြတာပါ။
လက်ရှိမှာတော့ နေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း နဲ့ ရဲလေး တို့ ပါဝင်ထားတဲ့ နှင်းဆီအငြိမ့် အဖွဲ့သားတွေ ကတော့ ခါတိုင်းနဲ့ မတူ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဥ် အသစ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို နှစ်သက် သဘောကျအောင် တင်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်နော်။
နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲ့ ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် Private Closed Group လေး တစ်ခု ကိုဖန်တီးပြီး ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ Fb Acc တစ်ခု ကို ငွေကျပ်(၅၀၀၀) သာ ပေးချေ ကာ Group Member အဖြစ် ဝင်ရောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုတွေ ကို အားပေးကြည့်ရှု နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်..။
အေးချမ်းတဲ့ December လ ရဲ့ ညတစ်ညမှာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နှင်းဆီပရိသတ်တွေ အတွက် ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေး တစ်ခု စီစဉ်ထား ပါတယ်.ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ လည်း အားလုံး ပျော်ရမယ် ကျွန်တော်တို့ နှင်းဆီ တွေ လည်း ပျော်နေရမယ့် အစီအစဉ် လေးပါ အဲ့ အစီအစဉ်လေး က ဘာလဲ ဆိုတော့ နှင်းဆီ ပရိသတ်တွေ အတွက် သီးသီး သန့်သန့် နွေးနွေး ထွေးထွေး ဆုံတွေ့ အားပေးလို့ ရမယ့် Private Closed Group လေး တစ်ခု ကို ဖန်တီးထားပါတယ်
နှင်းဆီ ကို ချစ်သော ပရိသတ် များအနေနဲ့ ကျွန်တော် တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ Private Closed Group လေးထဲ ကို Group Member အဖြစ် ဝင်ရောက်ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက် မှုများ ကို အားပေးကြည့်ရှု နိုင် မှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒီ နှင်းဆီ တွေရဲ့ Private Closed group ထဲ ကို ပရိသတ် တွေ က Group Members အဖြစ် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု အားပေးဖို့ အတွက် Facebook account တစ်ခု ကို ကျပ် ၅၀၀၀ သာပေးရမှ ာဖြစ်ပါတယ်.
ကဲ ကျွန်တော့် တို့ နှင်းဆီတွေ ရဲ့ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှု တွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို သိချင်ရင် တော့ ဒီ နှင်းဆီတွေ ရဲ့ Private Closed Group ထဲ ကို လာရောက် Join ထား ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Private Close group နာမည် နဲ့ ပြုလုပ်မယ့် ရက်နဲ့ အချိန်ကို လည်း ထပ်မံ ကြေငြာသွား ပါမယ်ဗျာ.သေချာတာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နှင်းဆီပရိသတ်တွေ အရမ်းပျော် နေစေမယ်ဗျာ.ကဲဘယ်လို လည်း မိတ်ဆွေ တို့? Stay Tuned’ ဆို ပြီးတော့ ၎င်းတို့ အဖွဲ့ ရဲ့ အစီအစဥ်သစ် လေးတစ်ခု ကို နေတိုး က ပြောပြထားခဲ့ တာမို့ ပရိတ်သတ်ကြီး အနေနဲ့ ပါဝင်ကြည့်ရှု ဖို့ အဆင်သင့် လုပ်ထားလိုက်ပါဦးနော်။
Previous post ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေ ကြောင့် လူကြိုက်များနေ တဲ့ အယ်လာ ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ
Next post မြင်ရသူ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားစေအောင် ဆက်ဆီကျ လွန်းတဲ့ ဗီဒိယို တွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်